राष्ट्रिय परिचयपत्र किन बनाउने ? « तपाईंको साझा इजलास
राष्ट्रिय परिचयपत्र किन बनाउने ?
राष्ट्रिय परिचय पत्र के हो ?
राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको नागरिकहरुको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समावेश भएको राष्ट्रिय पहिचान सहितको बायोमेट्रिक सुविधायुक्त बहुउपयोगी प्रमाणपत्र हो । नेपाली नागरिकको वैयिक्तक तथा जैविक विवरण सहितको परिचय खुल्ने गरी विद्युतीय प्रणालीबाट तथ्यांक तथा अभिलेख तयार गरी सुरक्षित भण्डारण व्यवस्थापन, उपयोग र नियन्त्रण गर्ने सो तथ्यांकको आधारमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर सहितको बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्य देशभर भई रहेको छ । व्यक्तिगत घटना जस्तै जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद आदिको दर्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन लगायत पञ्जिकरण सम्बन्धी काम गर्ने । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण सम्बन्धी काम गर्ने ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरि नागरिकका सूचना था विवरणहरु एकीकृत रुपमा राख्ने र यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधामा आवद्व गर्ने कार्य हो यो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार गर्न देहायका विवरण समावेश हुन्छन् जस्तै –व्यक्तिगत विवरणहरू (नाम, थर, जन्म मिति, लिङ्ग, आमाबुबाको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति÷पत्नी नाम, बाजेको नाम) औंला–छाप (१० वटा औंला) , आखाँको नानी, प्रस्ताविते ,परिचय नम्बर, फोटो, राष्ट्रियता, हस्ताक्षर, चिप्स आदि ।
नेपाली नागरिकहरूको वैयक्तिक र जैविक विवरणहरूको केन्द्रीकृत रूपमा भन्डारण तथा अभिलेख गरी सबै नागरिकहरूलाई परिचय खुल्ने र नदोहरिने गरी बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचय नम्बर (Unique Digital Identification) प्रदान गर्ने सरकारको यो तयारी ले धेरै कुरा मा टेवा पुग्ने छ । नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान सहितको बहुपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड प्रदान गर्नु स्वागतयोग्य कार्य हो । ब्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्रको रूपमा यो पत्रले नेपाली जनतालाई धेरै कुरामा फाइदा दिने छ । यसले मतदाता परिचयपत्रको रूपमा सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधारको रुपमा । सामाजिक सुरक्षा कार्डका रूपमा ।
सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि सहयोगी अभिलेखका रूपमा । अन्य सार्वजनिक सेवा सँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आवद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरुले झन्झट रहित, छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्ने सम्भव हुन्छ ।
१६ वर्ष उमेर पुरा भएको , नेपाली नागरिकताको प्रमाण– पत्र लिएको । परिचयपत्र प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्छ । निवेदन दिँदा परिचयपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले वा विभागले तोकेको निकाय वा अधिकारीलाई डिजिटल तस्विर, दुवै हातका १० औलाको रेखा सहितको डिजिटल ल्याप्चे छाप, हस्ताक्षर लगायतका व्यैक्तिक तथा जैविक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको सन्दर्भमा जैविक पहिचान भन्नाले व्यक्तिको फोटो र दश औंलाको छाप (Finger Print ) भन्ने वुझिन्छ । वैयक्तिक पहिचान अन्तर्गत व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिंग तथा त्यस्तै अन्य व्यक्तिगत विवरणहरू पर्दछन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको पृष्ठ भागमा राखिएको तथ्यांक सुरक्षित राख्ने विधुतिय साधन चिप्स हो । चिप्समा विभिन्न प्रकृतिका विवरण र तथ्यांकलाई पर्याप्त परिमाणमा संग्रह गरेर राख्न मिल्छ । यसमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित विवरणको अतिरिक्त अन्य विवरणहरु जस्तै pan, सवारी चालक अनुमतिपत्र (Driving license), गरीव परिचयपत्र सेमत राख्न सकिन्छ ।
आवश्यक परेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो विवरण उपयोग गर्न सक्दछ तर विभिन्न निकायले कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम मात्र प्रयोग गर्न सक्ने गरी गोपनियता सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा रहेको विवरण कसले कुन प्रयोजनको लागि हेर्यो, सोको अभिलेखीकरण समेत प्रणालीले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्रिय परिचय नम्बर भनेको के हो ?
प्रत्येक व्यक्तिको पहिचानलाई सजिलोसंग प्रस्तुत गर्न प्रयोग गरिएको सांकेतिक नम्वरलाई राष्ट्रिय परिचय नम्बर भनिन्छ । प्रत्येक ब्यक्तिलाई फरक–फरक रूपमा उपलब्ध गराइएको सांकेतिक अंक राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राखिएको हुन्छ जसलाई (Individual Unique Number) पनि भनिन्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा कुन–कुन निकायको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पालिका तथा केन्द्र हरु तोकि राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको विवरण दर्ता गर्ने कार्य सञ्चालन भइरहेको हुँदा सबैको सहभागिता र सहयोगको लागि अनुरोध गरिन्छ ।
प्रेम गिरी आजभोलि भ्रमको फण्डा चुरे बनेकोछ र चुरो कुरो बुझ्न वाँकी रहेका कारण चुरे
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,१. गएको बैशाख २० गते कोभिड महामारीको दोस्रो लहरका सम्बन्धमा यहाँहरूसँग सम्वाद